भैँसी होकी गोही : जन्मियो अनौठो जीव (भिडियोसहित)
(एजेन्सी) थाइल्याण्डको एक गाउँमा एक अनौठो जीव जन्मिएपछि त्यहाँका वासिन्दाहरु यतिबेला अच्चममा परेका छन् । भैँसीले जन्माएको उक्त जीव हेर्दा आधा भैँसी र आधा गोही जस्तो देखिन्छ । उक्त जीवको खुटा र जीउको अकार भैंसीको जस्तो छ भने टाउको र छालाको बनावट गोही जस्तो छ । थाइल्याण्डको वाङहिनको हाइरकमा जन्मिएको उक्त अनौठो जीव हेर्नेको भीड [&h..
प्रेमीले आइफोन नकिनिदिएको भन्दै मलमै नांगिइन् प्रेमिका, भाइरल बन्यो भिडियो
(एजेन्सी) पछिल्लो समय एप्पलको आइफोन किन्नका लागि मानिसहरुले अनेकौं हतकण्डा अपनाए..
६३ वर्षदेखि नंग पालेर गिनिज बुकमा किर्तिमान
सन् १९५२ देखी आफ्नो औलाको नंग नकाटेका एक व्यक्तिलाई अन्ततः गिनिज बुक अफ वल्र्ड र..
१७ औं शताब्दीदेखि १२ दुलहीको एउटै पहिरन (फोटोफिचर)
१७ औँ शताब्दीको अन्त्यदेखी एउटा परिवारका एघार जना दुलहीहरुले एउटै पेशाक विहेमा प..
ताइवानमा पान बेच्ने सुन्दरी
(एजेन्सी) यदी तपाई ताइवान घुम्न जानुभयो भने हातमा पान सुपारी बोकेर रोडको छेउमा ब..
मृत्युअघि ४७ वर्ष अस्पताल बस्ने व्यक्ति
टर्कीको बुर्सामा रहेका ७० वर्षिय एक व्यक्तिको गत साता निधन भएको छ । रोचक कुरा उनले निधनअघि ४७ वर्ष अस्पतालमा बिताएका थिए । गम्भिर बिरामी नभएपछि जाने ठाँउ कतै नभएपछि उनी अस्पतालमै बसे । सन् १९६८ मा आफ्नो सैनिक सेवा पुरा गरेपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । टाउको दुखेपछि अस्पताल भर्ना भएका अब्दूल्लह कोजानले […]
दुःख साट्न जापानी महिलाले अब भाडामा पुरुष लिन पाउने
जापानमा नयाँ सेवा सुरु भएको छ । काममा व्यस्त र साथि बनाउन नपाएका महिलाहरुले भाडामा पुरुष साथी लिन पाउनेछन् । उनीहरुले आफू बेखुसी वा उच्च तनावमा भएका बेला त्यस्ता पूरुषलाई बोलाउन सक्छन् । लाईसेन्स प्राप्त पुरुषहरुले रुने थेरापी गरेर महिलाहरुको तनाव घटाउन भूमिका खेल्छन् । सेप्टेम्बर २४ बाट जापानमा यस्तो सेवा सूचारु भएको थियो र [&h..
कुकुरको पनि प्लास्टिक सर्जरी गर्ने नयाँ ट्रेन्ड
मानिसहरुजस्तै जनावरलाई पनि मेकअप आवश्यक पर्छ वा पर्दैन । अहिले कोरियामा यो प्रश्न चर्चामा छ । दक्षिण कोरियालीहरुले आफ्नो घरमा पाल्दै आएका जनावरलाई प्लास्टिक सर्जरी गरेर राम्रो देखाउन थालेका छन् । कुकुरको पुच्छर काटेर साने पार्ने र कान काट्ने काम यसअघि नै विश्वका थुप्रै ठाउँमा हुदैँ आएको थियो । तर अहिले भने कोरियालीहरुले कुकुरला..
कोरियाली जोडीको लोभलाग्दो शरिरको रहस्य ( फोटोफिचर)
अहिले इस्टाग्राममा एउटा कोरियन जोडी निकै चर्चामा छ । आफ्नो परिवर्तित शरिरका आर्कषक फोटोहरु अपलोड गरेपछि यो जोडीले चर्चा बटुलेको हो ।केही समयअघि सोंग जि यो र उनकी श्रीमती सिन जी हो भद्धा शरिरका कारण चिन्तित थिए । विगत ५ महिनादेखी उनीहरु जीममा अनवरत सक्रिय छन् । उनीहरु एकसाथ जीम गर्छन् । त्यस्तै दैनिक तीनघण्टा […]
२ सय २० वर्षसम्म बाँचेको रुखको रहस्य
युक्रेनको सुमी क्षेत्रस्थित क्रोलिभेटस् शहरमा विश्वकै फरक शैलीको स्याउको बँगैचा यतिबेला चर्चामा छ । यस बँगैचामा एउटै मात्र रुख छ । तर २ सय २० वर्षको त्यस रुखमा थुप्रै हाँगा छन् । यस बँगैचालाई एप्पल ट्रि कोलोनी नाम दिइएको छ । यस रुख अझै शताब्दीऔँसम्म जीवित रहने अनुमान लगाइएको छ । सुरुआतमा यो रुख पनि […]
खरायोले अमेरिकीलाई बनायो हैरान
एजेन्सी–खरायोलाई धेरैले मायालाग्दो जनावरका रुपमा लिन्छन् । तर अमेरिकाको वासिंगटनस्थित ल्यांगली शहरवासीलाई भने यो जनावरले समस्या सिर्जना गरेको छ ।
एजेन्सी–डोमिनिकन रिपब्लिकमा एउटा त्यस्तो गाउँ छ जसमा कुनै पनि परिवारमा जन्मिएका कुनै पनि बालिका किशोरावस्थामा पुगेपछि बालक बन्छन् । देशको दक्षिण पश्चिम इलाकास्थित सैलिनास गाउँमा फैलिएको एक अचम्मको बिरामीले यस्तो स्थिती सिर्जना गरेको हो । यस गाउँमा कुनै पनि बच्चा जन्मदा केटी भएपनि किशोरावस्थामा केटा बन्छन् । गाउँमा यस्तो प्रचलन ब..
मण्डेला भनेर विद्यार्थी झुक्किएपछि….
एजेन्सी–नेल्सन मण्डेलाको विषयमा मोनिटरमा प्रेजेक्टशन पेश गर्न लागेका दुई विद्यार्थीहरु मण्डेलाको सट्टा मनिटरमा हलिउड अभिनेताको फोटो प्रस्तुत भएपछि रातोपिरो भएका छन् ।
आफ्नै नग्न फोटो मोबाइलमा राख्दा मुद्दा
न्युयोर्क – अमेरिकाका एक १७ वर्षिय किशोरमाथि आफ्नै नग्न फोटो मोबाइलमा राखेको विषयलाई लिएर मुद्दा चल्ने भएको छ । उत्तरी क्यारोलिनमा बस्ने कोर्मेगा ज्योन कोपेनिंगमाथि यस्तो मुद्दा चल्न लागेको हो । यसअघि प्रहरीले उनको मोबाइलमा नग्न फोटो भेटेका थियो । हाइस्कुलमा अध्ययनरत उक्त युवकले १६ वर्षको छँदा आफ्नी प्रेमिकासँग नग्न फोटो शेयर गर..
वीर्यदान गरे आइफोन सिक्सएस पाइने
विश्वभर एप्पलको आइफोनको क्रेज छ । मानिसहरुले आइफोन किन्नका लागि अनौठो कृयाकलाप गर्ने गरेको विभिन्न समाचारहरु हामी सुन्न पाइरहेका हुन्छौं । त्यही सिलसिलामा चीनको एक स्पर्म (वीर्य) बैंकले अनौठो अफर राखेको छ । चीनियाँ मिडियाका अनुसार देशका केही स्पर्म बैंकले त्यहाँ वीर्य दान गर्नेलाई आइफोन सिक्स एसको अफर दिएका छन् । एउटा अस्पतालको ..
अंगालो हालेर सुतेबापत लाखौं कमाउँछिन् यी महिला
अमेरिकाको न्युयोर्क सहरकी ३२ वर्षीया ज्याकी स्यामुअलले अनौठौं पेसा अंगालेकी छिन् । ‘प्रोफेसनल कड्लर’ अर्थात् व्यवसायीक रुपमा अंगालो हालेर सुत्ने पेसा अप्नाएकी स्यामुअलको यो पेसालाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा लिन्छन् । तर, उनी भने यही पेसा गरेर उनी दैनिक ३६० डलर (करिब ३६ हजार नेपाली रुपैयाँ कमाउँछिन् जसले उनको पढाई र छोराको खर्चको धा..
(एजेन्सी) मृत्युपछि स्वर्ग जान पाइदैँन भन्ने तपाईको जवाफ होला ? तर अब स्वर्ग नभएपनि झन्डै १२ लाख नेपाली रुपैयाँ खर्चनेले मृत्युपछि चन्द्रमा जान पाउँनेछन् । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित एक कम्पनीले १२ हजार डलरमा यस्तो योजना ल्याएको हो । यस कम्पनीको योजनाअनुसार १२ हजार अमेरिकी डलर तिर्नेको शव मृत्युपछि कम्पनीले चन्द्रमामा लगेर ..
कुमारी आमाको बच्चा लिलामीमा
(एजेन्सी) भारतको उत्तर प्रदेशस्थित एक अस्पतालका चिकित्सकले बच्चालाई लिलामीमा राखेपछि उनीमाथि कानूनी कारबाही हुने भएको छ । डाक्टर जितेन्द्र चौधरीले एक कुमारी आमाको शल्यक्रिया गरेका थिए । उनले शल्यक्रियापछि उक्त युवतीलाई बाबु बिनाको बच्चा राख्दा समाजमा अपहेलित भइने भन्दै बच्चालाई लिलामीमा राख्न उक्साए । त्यसपछि महिलाको उपचारमा संल..
के तपाईलाई महिला मात्रै भएको वस्तीका बारेमा थाहा छ । केन्यामा एउटा त्यस्तो भूभाग छ जहाँ महिलामात्रै बस्छन् । उमोजा नामक यस भूभागमा शरणार्थी महिलामात्रै बस्छ । २५ वर्षअघि रेबिका लोलोसोलीले बनाएको यस क्षेत्रमा पूरुषबाट हुने हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि पूरुषलाई प्रवेश दिइदैँन । उत्तरी केन्यामा बस्ने साम्बुरु जातिका व्यक्तिहरुले मह..
१९ वर्षिया सुन्दरीको अनौठो किर्तिमान
अमेरिकाको मिसौरी स्टेटकी १९ वर्षिया कैटलीन कोनेर एक मोडल तथा अभिनेत्री हुन् । तर उनी रोलर स्केटिंगमा रमाइरहेकी छिन् । उनले सन् २००८ मा पछाडिबाट सबैभन्दा लिम्बो स्केटिंगको अधिक लम्बाईको यात्रा गर्दै विश्व कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । त्यतिबेला उनको उमेर केवल ११ वर्षको थियो । त्यसपछि निरन्तर उनले पछाडीबाट स्केटिंग गर्दै आएकी छिन् । के..
यि हुन् जीसस क्राइस्टकी श्रीमती
३८ वर्षसम्म कुमारी रहेकी एक वयस्कले जीसस क्राइस्टसँग बिहे गरेकी छिन् । अमेरिकाको इन्डियानामा बस्ने जेसिकाले चर्चमा सबैका सामू जिसस क्राइस्टसँग बिहे गर्दै आजीवन एक्लै काट्ने घोषणा गरिन् । उनले आफू अहिलेसम्म भर्जिन रहेको तथा कसैसँग कहिल्यै बिहे नगरेको बताएकी छिन् । आफ्नो सौख नै जीसस क्राइस्टसँग बिहे गर्ने रहेको बताउँदै जेसिकाले रह..
घरबेटीको किचकिचबाट मुक्ति पाउन सुन्दरीको रेलको बास
घरबेटीसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि जर्मनीकी एक विद्यार्थीले ट्रेनमै रात काट्न थालेकी छिन् । लियोन भन्छिन्, ‘सूरुआतमा घरबेटीसँग विवाद चल्यो । त्यसपछि मैलेँ त्यहाँ कुनै हालतमा नबस्ने निर्णय लिएँ ।’ अहिले उनले विशेष टिकट खरिद गरेकी छिन् । यस टिकटपछि उनी विना कुनै शुल्क जर्मनीका सबै टे«नमा यात्रा गर्न सक्छिन् । उनी आजकल ट्रेनमै खान्छिन्, ..
हात गुमाएपनि स्वाभिवान नगुमाएका कृषक
(एजेन्सी) युवाअवस्थामै दुर्घटनाका क्रममा आफ्ना दुबै हात गुमाएपनि चीनियाँ कृषक चीन जिङयिन सामान्य जीवनयापन गर्दै समाजमा उदाहरणीय बनेका छन् । ४८ वर्षका चीन अधिकांश काम आफ्नो मुख र खुट्टाको सहाराले गर्छन् । त्यतिमात्रै होइन उनले आफ्नी ९१ वर्षिया वृद्ध आमाको समेत स्याहार गर्दै आएका छन् । चोङक्विङ शहरका जिङयिनको स्वाभिमानी कथाले पछिल..